Wararkii ugu dambeeyey dagaalka Magaalada Dhuusamareeb - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Wararkii ugu dambeeyey dagaalka Magaalada Dhuusamareeb
Dagaal xoogan ayaa weli waxaa uu ka socdaa Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug,kaas oo u dhaxeeya Ciidamada Dowladda & kuwa hoggaanka Ahlusunna,kaas oo geystay khasaaro kala duwan.
Dagaalka ayaa waxaa uu ka socdaa Xarunta Inji oo ay degan yihiin hogaanka sare ee Ahlusunna,waxaana Wariyeyaasha ku sugan Magaalada Dhuusamareeb ay soo sheegayaan in Dowladda ay Ciidamo farabadan geysay halka uu dagaalka ka socdo.
Waxaa jira khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo labada dhinac kasoo gaarey dagaalka weli ka socda Magalada Dhuusamareeb,waxaana dad ku sugan Magaaladaas ay sheegayaan in hubka waaweyn mararka qaar la maqlayo.
Sidoo kale wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in jug culus laga maqlay xarumaha Inji iyo Shiirkole oo kaabiga isku haya qiiq farabadana ay ka baxayaan,iyada oo inta badan Maanta ay xiran yihiin Goobaha ganacsiga ee Magaalada.
Next articleSAWIRO:-Wafdi ka socda Dowladda oo gaarey Gobolka Bakool